‘भोलि विप्लवको नेपाल बन्द’ भन्दै समाचार भाइरल ! यी हुन झुटो समाचार लेखेर पाठक झुक्याउने अनलाइनहरु — Sanchar Kendra
‘भोलि विप्लवको नेपाल बन्द’ भन्दै समाचार भाइरल ! यी हुन झुटो समाचार लेखेर पाठक झुक्याउने अनलाइनहरु
शनिबार १९ गते साँझतिर गणनामै नपरेका केहि अनलाइनहरुले फेसबुकमा एउटा झुटो कुरालाई समाचारको नाम दिएर भाइरल बनाउन खोजे । समाचारको टाइटल थियो- भोलि फेरी नेपाल बन्दको घोषणा । भोलि अर्थात् फागुन २० गते पुनः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल बन्द आव्हान गरेको सन्देश दिने समाचार थियो त्यो ।
‘पीआरखबर’ नामक अनलाइनले प्रकाशित गरेको उक्त समाचार प्रकाश तामाङ नामका व्यक्तिले ‘नेकपा एमाले जिन्दावाद’ नामक फेसबुक ग्रुपमा सेयर गरेको देखेपछि मैले त्यहि टाइटल फेसबुकमा सर्च गरे ।
त्यो न्युजको स्क्रिनसर्ट तल हेर्नुहोस् । साइट नै खोलेर न्युज आफै हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
न्युजको टाइटल छ- ‘भोलि फेरी नेपाल बन्द घोषणा !’ तर बिस्तृतमा समाचार हेर्नुहोस् यस्तो छ – ‘काठमाडौँ !! नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले भोली आइतबार देशैभरीका शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने भएको छ ।
उक्त संगठनका महासचिव दिपेन्द्र चलाउनेसहित देशभर पक्राउ गरिएका नेता कार्यकर्तालाई रिहाइ नगरेको भन्दै विरोधस्वरुप हड्तालको घोषणा गरेको हो ।
सरकारले गिरफ्तार नेताहरुको रिहाइको गर्नुको साटो देशभरबाट थप गिरफ्तार गरिरहेको छ । त्यसैले पूर्व घोषित शैक्षिक हड्ताल जारी रहेको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीले फागुन १६ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, फागुन १७, १८ प्रचारप्रसार, फागुन १९ अन्तरक्रियासहित २० गते आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेको थियो । भोलि शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आफ्नो आन्दोलनलाई सहयोग गर्न अखिल क्रान्तिकारीले सबैमा आग्रह गरेको छ ।’
अब तपाई मूल्यांकन गर्नुहोस् की माथिको टाइटल र तलको न्युजबीच के तालमेल छ ? शीर्षकमा विप्लवले नेपाल बन्द गरेको लेखिएको छ भने समाचार बिस्तृतमा हेर्दा नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारीले शैक्षिक आमहडताल गरेको सन्दर्भमा लेखिएको छ ।
यो समाचार लेख्ने पत्रकारले पाठकलाई झुक्याउने काम मात्र गरेको छैन की आम मिडियाकर्मी र अनलाइन मिडियाहरुको बेइज्जत गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी अर्को अनलाइनले प्रकाशित गरेको समाचारबारे कुरा गरौं । तनहुँ पोस्ट नामक अर्को अनलाइनले पनि सोहि समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
समाचार प्रकाशित गर्ने व्यक्तिले टाइटलको अगाडिपट्टि नै नेकपा महासचिव विप्लवको नामलाई निक्कै महत्वका साथ् यसरी राखेको छ – ‘विप्लव<<भोली नेपाल बन्द घोषणा आयो ओली लाइ अर्को डरलाग्दो चेतावनी !’ समाचारको टाइटलमा विप्लवले नेपाल बन्द आव्हान गरेको र केपी ओली सरकारका लागि त्यो डरलाग्दो खबर रहेको दावी गरेको छ ।
उक्त समाचारको लिंक हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला । तर बिस्तृतमा समाचार हेर्दा पीआर खबरकै माथि उल्लेखित समाचार जस्ताको त्यस्तै छ।
समाचार उस्तै छ मात्र टाइटल फेरिएको छ । यतिमात्रै कहाँ होर ? अर्को समाचार हेर्नुहोस् अब तपाई । सिसिर अनलाइन नामक उक्त न्युज पोर्टलले भने टाइटल तनहूँ पाेस्टकै राखेकाे छ तरसमाचार पीअार खबरकै छ ।
समाचार प्रकाशित गर्ने व्यक्तिले सिरिर लामाले टाइटलको अगाडिपट्टि नै नेकपा महासचिव विप्लवको नामलाई निक्कै महत्वका साथ् यसरी राखेको छ – ‘विप्लव<<भोली नेपाल बन्द घोषणा आयो ओली लाइ अर्को डरलाग्दो चेतावनी !’ समाचारको टाइटलमा विप्लवले नेपाल बन्द आव्हान गरेको र केपी ओली सरकारका लागि त्यो डरलाग्दो खबर रहेको दावी गरेको छ ।
भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने सिसिरको फेसबुकमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । यस्तै उक्त समाचारको लिंक हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला । तर बिस्तृतमा समाचार हेर्दा पीआर खबरकै माथि उल्लेखित समाचार जस्ताको त्यस्तै छ ।
यस्तै न्युज नेपाल टुडे नामक अर्को अनलाइन पोर्टलले पनि यो झुटो समाचार प्रकाशित गरेको देखियो । उक्त पोर्टलको समाचार टंक प्रसाद जोशी नामका व्यक्तिले फेसबुकमा सेयर गरेको देखियो । उक्त समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
यस्तै समाचार सञ्जाल नामको अनलाइनले पनि साेहि समाचार प्रकाशित गरेको भेटियो । यस्तो गलत र भ्रामक समाचार प्रकाशित गर्ने साइटका सञ्चालक कैलाली धनगढीका ललित बम रहेको बुझिएको छ ।
उनले पनि नेपालका पाठकलाई झुक्याएर डलरखेति गर्नकै लागि यो समाचार जस्ताको त्यसै चोरेर राखेको देखिन्छ । उक्त समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
यस्तै चौतारी अनलाइन डटकम नामको पोर्टलले पनि सोही समाचार जस्ताको त्यस्तै सार्दै पाठकलाई झुक्याउने खेलो गरेको भेटियो । हामीले खोजी गर्दै जाँदा उक्त अनलाइन चलाउने ब्यक्ति चित्रमण डाँगी भएको बुझिएको छ । उनका २ वटा फेसबुक एकाउन्ट डाँगी चित्रमण र भिजे डाँगी भेटिएका छन् । पाठक झुक्याउने उक्त अनलाइनको समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यस्तै माण्डबी खबर नामको अनलाइनले पनि साेही समाचार जस्ताको त्यसै कपी गरेको देखियो । पत्रकारका नामका ब्लगरहरुले नेपाली मिडिया क्षेत्रकै बेइज्जेत हुनेगरी कपी पेस्ट पत्रकारितालाई कति प्रश्रय दिएका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उक्त साइटको समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
हामीले खोजी गर्दा उक्त अनलाइन प्युठानका सिसिर केसी भन्ने व्यक्तिले चलाएको बुझिएको छ । यो उनले सिक्नका लागी वा रहर पुरा गर्न चलाएका हुन् भने पनि यसरी हचुवाका भरमा अरुका समाचार कपी गर्दै मिडिया क्षेत्रको बदनाम नगरेको भए हुने थियो कि ?
यस्तै यहि झुटो समाचार बराहा न्युज नामको अनलाइनले पनि प्रकाशित गरेको छ । हाम्रो अनुसन्धानमा उक्त अनलाइन धरानबाट सुमन मेहताले चलाएको बुझिएको छ । उक्त साइटको समाचार हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
तर गत फागुन ८ गते नेपाल कम्युनिष्टपार्टीले केपी ओली सरकारको दमनबिरुद्ध भन्दै संघर्षस्वरुप नेपाल बन्द अयोजना गरेको थियो । जुन समाचारलाई नेपाल सबै मिडिया हाउस हरुले समेटेका थिए । संचारकेन्द्रमा प्रकाशित उक्त समाचार भने ७४ हजार ६ सय जना पाठकले सिधै साइटबाट सेयर गरेका थिए । उक्त न्युज हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
फोटोमा हेर्नुहोस् यो झुटो समाचार प्रकाशन गर्ने केही अनलाइनका स्क्रिन शोर्टहरु
२०७४ आफुन १९ मा प्रकाशित ।